Media Mission Nepal बढ्दैछ शल्यक्रिया : बाध्यता कि रहर ? - Mediamission Nepal
बढ्दैछ शल्यक्रिया : बाध्यता कि रहर ?
Published On : 10 February, 2019 3:26 pm
On : मुख्य समाचार, स्वास्थ्य
सञ्चिता घिमिरे । ललितपुर, २७ माघ : सानेपाकी सरिता ढकाल गर्भवती भएदेखि नै स्वास्थ्यमा समस्या नआएकाले सन्तानलाई सामान्य रुपमा जन्म दिनेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो । महिनैपिच्छे पाटन अस्पतालमा जचाउँदा चिकित्सकले आमा र शिशु दुवैको अवस्था राम्रो रहेको जानकारी दिने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
चिकित्सकले पहिले आमा र शिशुुुुको अवस्था सामान्य भए पनि एकैपटक समस्या देखिएकाले सामान्य रुपमा सन्तान जन्मन नसकेको बताए । शिशु दुई साता शिशु स्याहार एकाइ (सिसियु) मा उपचार गराएर आमा र सन्तान गत साता घर फकिएका छन् ।